Wholesale Custom logo girazi chigadzirwa chigadzirwa Mugadziri uye mutengesi | OTAO
Nekuvandudzwa kweindasitiri yefoni, nhare mbozha dzinotiunzira zviri nyore muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Panguva imwecheteyo, iyo nguva yekushandisa nharembozha iri kuwedzera, ingangoita nguva yese nenharembozha chero. Icho chiri chikonzero ichi kuti nharembozha kuchengetedzwa kwave kutarisisa kwezuva nezuva kwekutarisa kwedu, uye zvakare kwakapa mukana uye kuvandudzwa kwenhare mbozha kesi uye skrini inodzivirira.
Sekuchengetedzwa kwenhare mbozha zvakagamuchirwa neese mazera nemapoka emaindasitiri, vanhu vanotanga kuve nechinodiwa chekuita, kusimudzira mhando, kana kupatsanura kugadzirwa pane zvigadzirwa, uye kunyangwe inopesana nenhema Semuenzaniso, nharembozha kesi ine akasiyana masitaera uye dhizaini, uye zvishoma nezvishoma pane inoenderana kudiwa kwegirazi rakadzikama, kuwedzera kune dhizaini yekutengesa package.
Parizvino, isu tinotanga kuratidza marogo akasiyana kana mapatani pane firimu rakabatikana.
1. Laser / silika yekudhinda logo
Kuburikidza ne laser kana silika yekudhinda tekinoroji, iyo logo inonyatsoratidzwa pane inoomeserwa girazi.
2. Yakakangwa logo
Kuburikidza netekinoroji inoenderana, mucherechedzo unoratidzwa pagirazi, haukanganisa kuratidzwa uye kushandiswa kwescreen, chete kuburikidza nemhute, zvigunwe zvemunwe, ziya, kana mafuta stain kuratidza logo. yakakodzera marogo madiki, uye mazwi mapfupi.
3. Hologram danda
Iyo logo yakavezwa pagirazi rakadzikama kana iyo skrini yefoni ichivhenekera, zvinoratidzika, kana iyo skrini ikavharwa, inoratidza pachiratidziri chako. Parizvino, tinogona kuita ese marudzi eLogo, mapatani, IPs, uye zvinyorwa, izvo zvinonyanya kukodzera kusimudzira mhando, senge zvipo, yakazvimirira IP zvigadzirwa zvinokura, kana chigadzirwa chigadzirwa chigadzirwa. Panguva imwecheteyo, inogona kuiswa kune mamwe akasiyana magirazi anoshanda akatsamwa.
● Nhare mbozha dze iPhone:
● iPad / Hwendefa
Kuisirwa OTAO kutsamwa firimu iri nyore kwazvo uye nyore. Kana iwe uri kufunga nezve iyo terminal, iwe unogona zvakare kusarudza yedu yekushandisa (inonzi zvakare yekuisa tireyi) kubatsira iyo yekuisirwa. Kunyangwe mutengi asina ruzivo rwemufirimu anogona nyore kuisa firimu pairi.
Yakasimba Girazi Screen Kudzivirirwa
Iyo aluminium-silicate girazi uye iyo tempering tekinoroji inoshandiswa muOTA Girazi Rinodzora kuti riwedzere kumeso kwekushushikana kwegirazi kuita kuti muviri uzere usimbe.
Kunonyanyisa Kukanda Kudzivirirwa
OTAO Girazi rakadzikama rinoshandisa premium girazi zvinhu uye yakasarudzika yakaoma kuputira kurapwa.Saka inodzivirira mizhinji mukukanganisa muhupenyu hwezuva nezuva neakadai semashizha, chigero, makiyi nezvimwe zvakaoma, zvakapinza zvinhu pamusoro pevhu kutsvaira.
Bubble Yemahara & Guruva Mahara
Kuti uchengetedze mutengo, mafekitori mazhinji anogadzira munzvimbo isina guruva, uye zviri nyore kupinza guruva muchigadzirwa AB, uye rimwe guruva rakaoma kuwanikwa kana risati ranyatso kuongororwa kuongororwa mushure mekugadzirwa, kusvikira zvabatanidzwa. Unogona kuzviona parunhare, nguva yakwana.
Mamwe mafekitori anoshandisa yakaderera-mhando AB glue, uye mabhuru emhepo anogona zvakare kuoneka.
OTAO inotora yepamusoro-yakajairwa mhando yekuongorora maitiro, kubva pane zvakasvibirira zvigadzirwa, kugadzirwa nharaunda, yekugadzira nzira yekupedzisira yekuchengetedza, zvakanyatso kudzora, uye kununura inokwanisa isina guruva-isina uye isina bhuru-isina hasha girazi screen mudziviriri kwauri.
Yakaomeswa Smooth Oleo-phobic Kuchengeta Kurapa
Dambudziko reminwe yeminwe rinogumbura nekuti rinoderedza kuoneka kwescreen. Pamusoro pezvo, pane matambudziko akaita sekumwaya mvura nekudonhedza mafuta, izvo zvinoita kuti zvinhu zviwedzere.
Asi zvinhu izvi hazviitike muOTOO yakanyorovera girazi screen mudziviriri Saka nekudhinda uye kubata pamusoro pefoni zviri nyore kwazvo uye zvisina kunetsa.
Isu tinoshandisa plasma yekumwaya uye yeelectroplating maitiro kuenzanisa mafuta eminwe kubva kuJapan pane girazi firimu kuti uwane unogara hydrophobic, mvura- uye mafuta-anodzora maitiro.
Pashure: 2.5D Matte Screen Dziviriro ye iPhone 12 akateedzana
Zvadaro: Pepa inzwa firimu rePad Pro Pro 10.9 ″ ine yakanaka yekunyora zviitiko uye dziviriro yechidzitiro